Personalized Internet Assessor (1) Post @ Lionbridge | ပဲခူး | ads.com.mm
Personalized Internet Assessor (1) Post @ Lionbridge
Personalized Internet Assessor Myanmar
Are you looking forajob that gives you the opportunity to work with one of America’s top 100 most trusted Companies while also increasing your income from the comfort of your home? Then why not join Lionbridge asapart-time Independent Contractor. We are currently recruiting for the role of Burmese speaking Personalized Internet Assessors in Myanmar.
•	You must be fluent in written and verbal English & Burmese
•	You must be living in Myanmar for the last5consecutive years
•	You must have familiarity with current and historical business, media, sport, news, social media and cultural affairs in Myanmar
Don’t Delay! Submit your application andamember of our recruitment team will review your application.
ရောင်းသူ: Lionbridge GSS Ltd.
စက်တင်ဘာ 15, 09:49
ရောင်းသူထံစာပို့မည် Lionbridge GSS Ltd.
သင်၏အလုပ်လျှောက်လွှာကို pdf အမျိုးအစားဖြင့်သာတင်ပေးပါရန်။
ဖုန်းခေါ်မည် Lionbridge GSS Ltd.
ဤကြော်ငြာကို ads.com.mm မှတွေ့ရှိသည်ဟုပြောကြားပေးပါ။
ရောင်းချသောပစ္စည်းမှာကောင်းလွန်းနေလျှင်လည်းအတုဖြစ်နိုင်သည်။ လူလိမ်တစ်ယောက်သည်ပုံမှန်ဈေးနှုန်းထက်အလွန်နိမ့်သောဈေးဖြင့် ရောင်းချလေ့ရှိသည်။ အထူးသတိပြုပါ!
ဤကြော်ငြာကိုAds.com.mmအားအသုံးပြုသူတစ်ဦးမှတင်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကြော်ငြာထားသောပစ္စည်း၏ အရည်အသွေးနှင့်စစ်မှန်မှုပိုင်းဆိုင်ရာအတွက် Ads.com.mm မှအာမခံချက်အပြည့်အဝပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါခင်ဗျာ။
Kitchen Helper (1) Post
အထွေထွေ ဝန်ထမ်း (၁) ဦး
Waitress (5) Posts
အအေးမျိုးစုံနှင့် သစ်သီးဖျော်ရည် ဖျော်နိုင်သူ (၁) ဦး
Waitress (2) Posts @ Cafe&Bakery
ကျွန်ုပ်တို့ထံတွင်ရှိသောကြော်ငြာများကိုအရည်အသွေးပြည့်မှီကောင်းမွန်စေရန် အမြဲကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ ထို့ပြင် လူကြီးမင်းတို့ထံမှမည်သည့်အကြံပြုချက်များကိုမဆိုဝမ်းမြောက်စွာလက်ခံဆန်း
အကြောင်းအရင်းကိုရွေးချယ်ပေးပါ။ သူတစ်ပါးကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ အလိမ်အညာဖြစ်သည်။ ရောင်းထွက်ပြီးဖြစ်သည်။ ထပ်နေသောကြော်ငြာဖြစ်သည်။ ကဏ္ဍမှားယွင်းနေသည်။ သူတစ်ပါးကိုထိခိုက်စော်ကားသည်။ အခြားအကြောင်းအရင်း